စားသုံးဆီ | သြဂုတ်လ 2021
Lotus Root ဘယ်လိုကြီးထွားလာမလဲ
2021 | တင်ပို့ Paul Adams | အမျိုးအစား: စားသုံးဆီ
lotus အမြစ်သည်ရေနေအပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအာရှရှိလူကြိုက်များသောစားသုံးနိုင်သောအမြစ်ဖြစ်သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဥယျာဉ်တော်၌ကြာပန်း root ကိုဘယ်လိုကြီးထွားဖို့ဘယ်လိုရှင်းပြပါလိမ့်မယ်!
ဖရဲသီးကြီးထွားရန်မည်သို့: နွေရာသီရဲ့ Bounty ရန် Ultimate လမ်းညွှန်
ကြီးထွားလာသောခရမ်းချဉ်သီးများ - နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံး Salsa Verde ကိုခံစားပါ
မင်းရဲ့ဆဲလ်ဆာကိုကြိုက်လား? ခရမ်းချဉ်သီးများကြီးထွားရန်လွယ်ကူသည်၊ ခရမ်းချဉ်သီးနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ဆုံးလမ်းညွှန်ကသင့်အားမည်သို့ပြသမည်ကိုပြပါလိမ့်မည်။
Lingonberry အပင်များ - အရသာရှိသောအသီးများအတွက်လမ်းညွှန်
Lingonberry အပင်များသည်နည်းနည်းလှည့်စားနိုင်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်၎င်းတို့ကိုတန်ဖိုးရှိစေသည်။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းအနီရောင်သစ်သီးသီးနှံများကိုရိတ်သိမ်းရန်သင်လိုအပ်သည့်အရာများမှာဤတွင်ပါ။
ကြီးထွားလာသခွားသီး: Cucumis Sativus မှ Ultimate လမ်းညွှန်
သခွားသီးကိုကြိုက်လား? အိမ်တွင်သခွားသီးများကိုစိုက်ပျိုးခြင်းသည်အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်လွယ်ကူသည်။ သင်သိရန်လိုအပ်သည့်အရာများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ပြီးပြည့်စုံသောကြီးထွားလာသောလမ်းညွှန်ကိုကြည့်ပါ။ သငျသညျဤမျှလောက်များစွာသောကြီးထွားပါလိမ့်မယ်သင် extras ကွာပေးပါလိမ့်မယ်!
Horseradish စက်ရုံ: အချက်အပြုတ် Adventures များအတွက်ပူအမြစ်
သငျသညျအစဉ်အဆက်ဟာ horseradish စက်ရုံကြီးထွားလာစဉ်းစားဖူးပါသလား ဒီစပ်အချက်အပြုတ်အမြစ်ကြိုးစားအားထုတ်မှုကျိုးနပ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြီးထွားလာလမ်းညွှန်သင်မည်သို့ပြသထားတယ်!
ပဲစေ့ကိုဘယ်လိုတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲ - သင်သိဖို့လိုအပ်သမျှ
ပဲစိုက်ပျိုးနည်းကိုလေ့လာခြင်းသည်ဥယျာဉ်မှူးတစ် ဦး အနေဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သမျှတွင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤစွယ်စုံ စား၍ အရသာရှိသောဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်အလွန်ကြီးမားသောထုတ်လုပ်သူများဖြစ်ပြီးအလွန်ကျန်းမာသည်။
Apios Americana: သင်၏ဥယျာဉ်အတွက်ရှားပါးသောစပျစ်ဥယျာဉ်များ
Lovely Apios americana သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စားသုံးနိုင်သောဥများနှင့်ပန်းများနှင့်အတူစိမ်းလန်းစိုပြည်သောစပျစ်နွယ်ပင်များကိုထုတ်လုပ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ရှယ်ယာအချက်အလက်ကြီးထွားလာ!
Hardneck ကြက်သွန်ဖြူ: လှပသောအရသာမီးသီးများကြီးထွား
ခရမ်းရောင်သို့မဟုတ်ပန်းရောင် - အဖြူရောင်၊ သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောကြက်သွန်ဖြူကိုယခုနှစ်တွင်စိုက်ပျိုးပါစေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်ကသင့်အားထိပ်ဆုံးအကြံဥာဏ်များပေးသည်။
ကြီးထွားလာ Moringa: အ Majestic Drumstick သစ်ပင်
moringa ကြီးထွားလာခြင်းဆိုသည်မှာသင်သည် superfood နှင့်အရိပ်ပင်တစ်ပင်ကိုတစ်ခုလုံးတွင်ရှိသည်ဟုဆိုလိုသည်။ ဒီအာဟာရရှိတဲ့အပင်ကြီးထွားလာခြင်းနှင့်ရိတ်သိမ်းခြင်း၏အစီအစဉ်များကိုလေ့လာပါ။
အချိန်တိုင်းကြမ်းတမ်းလာသောအခါသင်၏မိသားစုအတွက်စားနပ်ရိက္ခာပေးရန်သင့်ရှင်သန်ရန်ဥယျာဉ်သို့လှည့်နိုင်သည်။ ဤတွင်ဆက်လက်ရှင်သန်ရန်စိုက်ပျိုးရန်အကောင်းဆုံးသီးနှံ ၂၀ ပင်!
ကြီးထွားလာသည့် beets - ကျဆုံးခြင်းနှင့်နွေ ဦး ပေါက်ရာသီအတွက်အမြစ်ထွက်သီးနှံများ
သုပ်အရက်ဆိုင်များတွင်ထူးဆန်းသောအနီရောင်အရာများအဖြစ် Beets သည်နှစ်များတစ်လျှောက်မကောင်းသောအကျင့်တစ်ခုရခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ဖြစ်စရာမလိုတော့ဘူး၊ အိမ်မှာ beets ကြီးထွားဖို့ကလွယ်ကူပြီးကျန်းမာတဲ့အမြစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုရှာဖွေနေသလား။ beets ကြီးထွားလွယ်ကူပါတယ်! ကျွန်ုပ်တို့၏စေ့စေ့စပ်စပ်ကြီးထွားလာသောလမ်းညွှန်သည်မျိုးစေ့မှရိတ်သိမ်းခြင်းအထိဖြစ်စဉ်ကိုရှင်းပြသည်။
A မှ Zucchini အထိနွေရာသီ squash: အကောင်းဆုံးအမျိုးအစားများနှင့်မည်သို့ကြီးထွားရန်
နွေ ဦး ပေါက်ရာသီသည်ဆောင်း ဦး ရာသီတစ်လျှောက်လုံးနွေရာသီရာသီဥတုကြောင့်ရယ်မောဖွယ်ကောင်းသောရိတ်သိမ်းခြင်းကိုပေးနိုင်သည်။ ဤလုံလောက်သောထုတ်လုပ်သူသည်ပိုပိုပြီးထွက်လာရန်ကြိုးစားနေသည်နွေရာသီရာသီဥတုကြီးထွားလာသောအခါများစွာသောရိတ်သိမ်းမှုသည်သင့်အတွက်ဖြစ်နိုင်သည်။ နွေရာသီ squash အမျိုးအစားများနှင့်ကြီးထွားလာရန်သင်လိုအပ်သမျှစာရင်းကိုဒီမှာရယူပါ။
ကြီးထွားလာ Kale: သင်၏ကိုယ်ပိုင် Superfood ကြီးထွား
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင် superfood ကြီးထွားနိုင်ပါတယ်! ကြီးထွားမှုကိုက်လန်ကြီးထွားလွယ်ကူခြင်းနှင့်ပျော်စရာဖြစ်ပါတယ်။ သင်၏အကြောင်းအရင်းကိုသင်၏ကြီးထွားလာသောကြီးထွားလာသောလမ်းညွှန်၊ သင်၏စပါးရိတ်သိမ်းခြင်းနှင့်သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက်အကြံပေးချက်များနှင့်အတူလေ့လာပါ။
လက်ဖက်စိုက်ပျိုးခြင်း - ဇင်ဥယျာဉ်တွင်ရှာဖွေခြင်း
သင်ရိတ်သိမ်း။ ပျော်မွေ့ရန်လက်ဖက်စိုက်ပျိုးခြင်းကိုစဉ်းစားဖူးပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏နက်ရှိုင်းသောကြီးထွားလာသောလမ်းညွှန်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်လက်ဖက်ရည်ရိတ်ရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုလေ့လာရန်ကူညီပေးသည်။
Leeks - သူတို့ကိုကြီးထွားရန်နှင့်ရိတ်သိမ်းရန်အတွက်သင်သိထားသင့်သမျှ
leeks လို့ခေါ်တဲ့အချက်အပြုတ်မွေ့လျော်မှုကိုကြီးထွားစေလိုပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်သောကြီးထွားလာသောလမ်းညွှန်ကသင့်အားမျိုးစေ့မှသိုလှောင်ခြင်းအထိအဆင့်တိုင်းကိုပြသသည်။
တစ် ဦး အိပ်ရာအတွက်ကညွတ်ကြီးထွားဖို့ဘယ်လို